यी व्यक्तिका कारण ओलीको योजना ध्वस्त, कांग्रेसलाई हेप्न खोज्दा कम्युनिस्टले पाए सजाय ! - Experience Best News from Nepal
यी व्यक्तिका कारण ओलीको योजना ध्वस्त, कांग्रेसलाई हेप्न खोज्दा कम्युनिस्टले पाए सजाय !
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ड उप्रेतीलाई भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले निर्णय गरेपछि चर्काे विरोध भयो ।
संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई अन्यत्र नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्थानलाई चुनौती दिँदै ओली सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर सिफारिश गरेको थियो । अर्काे दबाबपछि ओली झुक्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको जनाइएको छ ।
असार ३२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै सत्तारुढ नेकपाभित्र तिब्र विरोध भएको थियो । आफ्नै पार्टीका नेताहरुको दवाव पछि प्रधानमन्त्री केपी ओली उप्रेतीको नाम अघि नबढाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने बेला उप्रेती र मलेसियाका लागि सिफारिसको निर्णय गरिएका उदयराज पाण्डेलाई मलेसिया दुवै नाम हटाएका हुन् । हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेवसाइटमा राखिएको असार ३२ गतेका निर्णय सूचीमा राजदूतका बारे गरिएको निर्णय राखेको छैन । बैठकले ६१ वटा निर्णय गरेकोमा ६० वटाको मात्र सूची प्रकाशित गरेको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय त्यसदिन सार्वजनिक भएको हो तर अहिले प्रमाणीकरणमा त्यो निर्णय आएन’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘यसको अर्थ उक्त निर्णय अब कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने हो ।’ यसअघि पनि प्रमाणीकरण नभएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय लागू हुँदैनथे ।
३२ गतेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता गोकुल बांस्कोटाले राजदूत सिफारिसको निर्णय सुनाएका थिए । तर निर्णय थाहा पाए लगत्तै नेकपाको सचिवालयका अधिकांश नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए । भारतजस्तो मुलुकको राजदूत सिफारिस गर्दा सल्लाह नगरिएको भन्दै शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए । उप्रेतीको सिफारिसबारे निर्णयको बचाउ गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि सकेनन् ।
नेताहरुले भारतका लागि राजदूत बनाउन उप्रेती योग्य नभएको राय अध्यक्ष ओलीलाई दिएका थिए । ‘भारत नेपालले राख्ने राजदूतहरूमध्ये एक नम्बर प्राथमिकताको मुलुक हो, त्यसैले त्यहाँ लैजाने व्यक्ति राजनीतिक रूपमा परिपक्व हुनुपर्छ भन्ने सुझाव हामीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका हौं,’ नेकपाको सचिवालयका एक सदस्यले भने ।
उप्रेतीलाई राजदूत सिफारिस गरेपछि बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरूबीच पार्टीको कार्यशैलीबारे कुरा उठेको थियो । त्यसक्रममा उप्रेतीको उदाहरण दिंदै नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्न गरेका थिए । उनीहरूले पार्टी्भित्र छलफल गरेर मात्र भारतका लागि राजदूत पठाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उप्रेतीका सम्बन्धमा संवैधानिक निकायको प्रमुख भइसकेको व्यक्ति राजदूत बन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवाद पनि आएको थियो ।
त्यही धारामा ‘तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
सरकारले राजदूत पदलाई सरकारी नभई ‘राजनीतिक पद’ का रूपमा व्याख्या गरेको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई राजदूतमा नियुक्त गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने प्रष्ट देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै जारी गरेको राजदूत नियुक्तिको मापदण्डमा विषय विज्ञ र सम्बन्धित मुलुकबारे बुझेको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
उप्रेतीले भारतलाई कति बुझेका छन् भन्ने प्रश्न पनि नेकपाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री समक्ष उठाएका थिए । भारतसँग विकास गर्नुपर्ने सम्बन्धको गहिराइलाई उप्रेतीले कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्लान् भन्ने विश्वास नरहेको भन्दै नेताहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
राजदूत नियुक्तिमा कम्युनिस्ट सरकारले कांग्रेससँग सल्लाह र परामर्श नै नगरेर अगाडि बढेपछि भारतले उप्रेतीलाई अविश्वास गरेको टिप्पणी भएको छ । उप्रेतीलाई राजदूत नियुक्ति गर्ने विषयमा संवैधानिक अड्चना पनि रहेको छ ।
हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने ओलीको बानी राजदूत सिफारिस प्रकरणमा पनि देखिएको छ । चर्काे विरोध खेप्दै अलोकप्रिय भइरहेका ओलीले जथाभावी निर्णय र काम गर्न छाडेका छैनन् ।
आज कति छ त नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य ?
यसकारण कालो हुन्छ योनी को रङ्ग, गोरो बनाउने उपाय सहित !!